Ahoana no fomba ahazoana vokatra tsara ny vokatra Amazonao?
Raha manontany tena ianao hoe inona no hivarotana amin'ny Amazon amin'ny 2018, ity lahatsoratra ity dia ho mahaliana anao. Eto izahay dia hiresaka momba ny tsiambaratelon'ny fahombiazana amin'ny Amazon sy zavatra izay hitondra tombony ho anao. Ankoatra izany, handalo ireo olana fototra amin'ny fivarotana Amazon amin'ny alalànareo mba hanampy anareo hisoroka ny fahadisoana iombonana.
Ahoana ny fikarohana momba ny famokarana vokatra azo amidy amin'ny Amazon?
Eo amin'ny tsipika farany amin'ny fampiroboroboana ny Amazonasanao, mila mahita vokatra azo inoana fa mahasoa sy mahasoa. Dingana tena tompon'andraikitra izay mitaky fotoana sy ezaka ataonao. Soa ihany, Amazon dia manome anao ny ankamaroan'ny angona azonao hanombohana - affumicatrici online.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manamarina izay mahatonga ity orin-javatra mahasoa anao ho toy ny mpivarotra. Tokony handalo endrika toy ny vidin'ny fandefasana entana ianao, ny fifaninanana amin'ny tsenan'ny marika, ny laza ary ny fitondrantenan'ny mpanjifa amin'ny vokatra amin'ity kilasy ity. Ny safidinao dia tokony hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fepetra manaraka.
Ireto manaraka ireto dia azo antoka fa azo atao ny manao safidy tsara:
ny vidiny dia ho 35% ny vidin'ny varotrao;
loka mivarotra eo anelanelan'ny $ 10- $ 50;
fa tsy entana sarotra noho ny lanjan'ny zavatra (2-3 lbs. Max);
dia aleo kokoa ny zavatra entinao hipoitra sy mora entina;
misoroka vokatra ara-potoana na fialan-tsasatra mandritra ny fialan-tsasatra satria tsy hahasoa anao ny taona manontolo;
ny vokatrao dia tokony hanavaka ny kalitaony sy ny maha-tokana azy.
Ankoatra ireo voatanisa rehetra voalaza etsy ambony, mila manamarina ianao fa misy zavatra avo lenta, na tsy mahazo sitraka eo amin'ny Amazon mpanjifa. Na izany aza, tokony mila matoky ianao fa ny vokatra dia tsy manana fifaninanana be loatra satria hampihena ny fahafahanao mitsangana amin'ny vahoaka.
Ny antony lehibe sasany dia manondro ny ambaran'ny vokatra entina amin'ny Amazon:
ny vokatra izay nofidianao dia tsy tokony halefa amin'ireo mpivarotra amidy lehibe na orinasa lehibe;
ny vokatra mitovy amin'izany dia manana ambaratonga ambony amazonin'ny 5000 na ambany amin'ny sokajy voalohany;
lisitry ny vokatra tahaka izany dia tsy malaza eo amin'ny mpampiasa;
ny tsy fisian'ny vokatra vokatra;
ny teny fanalahidy tarihin'ny vokatra dia manana fikarohana mihoatra ny 100.000 isam-bolana.
Teo amin'ny dingana faharoa amin'ny fikarohana momba ny tsena dia mila manamarina ny mombamomba ny vokatra momba ny zavatra mifandraika amin'izany. Ny lisitry ny lisitra dia afaka mitantara betsaka momba ny kalitaon'ny vokatra sy ny tombony. Rehefa manokatra pejy amin'ny pejy Amazon, tandremo ny vidiny, ny fandefasana entana, ny vokatra, ny lanjany, ary ny Amazon bestseller rank. Tokony hodinihina manokana ny fitsidihan'ny mpanjifa sy ny fanamarihan'ny kintana ny singa manokana. Ny isa sy ny hatsaran'ny vokatra vokarin'ny vokatra dia mampiseho ny valintenin'ny mpampiasa amin'ny singa manokana sy ny lazany.
Ahoana no ahafahan'ny Amazon Best Sellers manampy anao hanapa-kevitra tsara?
Amazon Best Seller rank dia lisitry ny TOP 100 fivarotana zavatra amin'ny sokajy rehetra. Ity lisitry ny lisitra ity dia mety miovaova isan'andro. Raha toa ianao ka eo amin'ny dingan'ny fifidianana ireo zavatra sarobidy hivarotana amin'ny Amazon, ity fizarana ity dia hahaliana anao ny mijery. Avy amin'ity pejy ity, afaka mandehandeha any amin'ny TOP 100 mpividy indrindra amin'ny sokajy sy sokajy hafa. Mety ho sarobidy ho an'ny vokatra famokarana vokatrao izany.
Hikaroka amin'ny lisitry ny lisitry ny mpivarotra Amazon, mila mampifantoka amin'ireto sokajy manaraka ireto ianao:
Ity fizarana ity dia mampiseho ireo vokatra malaza izay nanjary nalaza sy nividianana tamin'ny farany. Ireo tahirin-kevitra ireo dia mifototra amin'ny lisitry ny mpikaroka sy ny analytics momba ny lisitry Amazon. Eto dia afaka mandehandeha ianao mba hijery ireo Vaovao mahaliana vaovao amin'ny sokajy manokana sy ny sokajy manokana. Aoka ho fantatra fa afaka miova tsikelikely izany.
Amin'ny ankapobeny dia misy ny fivoarana mafana sy ny fivarotana an-tsekoly. Ireo vokatra ireo dia mendrika fiheverana manokana satria malaza sy mampanantena izy ireo, nefa mbola tsy mifaninana be. Ankoatra izany, ity sokajy ity dia mety ho ilaina amin'ny fitadiavana ny loko mafana.
Ny ankamaroan'ny faniriana
Ho hitanao ao amin'ny Amazon. Amin'ny teny hafa, ireo mpivarotra amoron-tsambo dia mamonjy ireo zavatra ireo amin'ny lisitra faniriany. Tsy manamarina ny fividianana izany fa maneho ny safidin'ny mpanjifa.
Ho hitanao eto ny vokatra azon'ireo Amazon mpanjifa mividy fanomezana. Fampahalalana tsara ho an'ireo mpividy tsara indrindra ao anatin'ny sokajy nichea mandritra ny fizaran-taona ara-potoana, sy ny fialan-tsasatra.
Ny olana mahazatra amin'ny fivarotana amin'ny Amazon
Ny mpivarotra dia mahazo ny volany mandritra ny herinandro maromaro
Raha mivarotra ny vokatrao amin'ny Amazon, mila manaraka ny mpanjifa Amazon Seller na Vendor Central. Araka ny voalazan'izy ireo, ny fandoavam-bola dia azo atao amin'ny fametrahana mivantana ny kaontinao fanamarinana isaky ny 14 andro. Tsy misy rafitra fandoavam-bola hafa azonao ampiasaina amin'ny Amazon. Mila mandray an-tanana ity olana ity ianao rehefa mandamina ny paikady momba ny varotra. Ohatra, raha mampiasa ny fidiram-bola avy amin'ny varotrao ianao hividianana ny vokatra vaovao hivarotana, dia mety ho vato mahatafintohina ho an'ny raharaham-barotra.
Amin'izao andro izao, tsy mora ny ho lasa mpivarotra amoron-dalana Amazon taloha. Maro ireo mpivarotra mandika ny lalàn'i Amazon ary tsy mitondra tombony amin'ny sehatra. Izany no nahatonga an'i Amazon ho henjana kokoa amin'ny famelàna mpivarotra hivarotra ny entana eo amin'ny sehatra iray. Ny mpivarotra te-hanamboatra fitafiana, kiraro, fitaovana fiara ary karazana sarobidy sarobidy, mila mahazo fankatoavana avy any Amazon.
Miatrika fahasarotana ianao amin'ny fananganana fanehoan-kevitra momba ny feedback
Tokony hanana tantara lava lava ianao, SERP. Ankoatra izany, voarara ny hamporisika ny mpiserasera handefa valiny amin'ny vokatrao. Raha hitan'i Amazona fa tsy mirakitra ny fanehoan-kevitrao ianao, dia hofoanana avokoa izy rehetra ary ho very ny lanjanao.